Ciidamo Ethiopian ah oo hor leh oo soo buux dhaafiyay Magaalada Beydhabo. – idalenews.com
Wararka aan saaka ka heleyno Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Bay ayaa ku soo waramaya in Ciidamo aad u tiro badan ay buux dhaafiyeen Magaalada kuwaas oo qeybo badan oo ka mid ah halkaasi saldhigyo Ciidan ka sameystay.
Dad deegaanka ah ayaa shabakadda Idalenews.com u sheegay in Ciidamadu ay isku fidiyeen qeybaha kala duwan ee Magaalada waxaana soo gelitaanka Ciidamadani ay imaaneysaa xilli horay ay Ciidamada Ethiopia ay isaga huleeleen Gudaha Beydhabo.
wararku waxa intaasi ku darayaan in ciidamo aad u hubaysan oo dad argagixiyey ay fariisamo cusub ka sameysteen Maaya-foolka, Cali axmaar iyo suuqa xoolaha.
kooxada Islamiga ah ee soomaalida Al-shabab ayaa inta badan weeraro ka geysta Magaalada Beydhabo ee Xarunta Gobolka Bay kuwaas oo ay ku bartilmaamsadaan Xarumaha Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay ku leeyihiin Magaalada Beydhabo.
Illaa iyo haatani Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Saraakiisha Ciidamda Ethiopia iyo Kuwa Maamulka Gobolka Bay ee ku aadan Ciidamadaasi buux dhaafiyay Magaalada ah.
Madaxweynihii Hore ee soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo arin xasaasi ah ka hadlay(Akhriso).